I-Lookout: Indawo ekhethekileyo yokubalekela izibini - I-Airbnb
I-Lookout: Indawo ekhethekileyo yokubalekela izibini
Indawo ekhethekileyo yokuhlala ngokwenene! Phupha ukubaleka kwabatshatileyo!
I-Lookout ihleli kwindawo enethamsanqa: ilitye eliphoswe kude kumda wengxondorha, elijonge unxweme olumangalisayo lwe-Quepos / Manuel Antonio, kwaye ijikelezwe yindalo, kunye notyelelo lwemihla ngemihla oluvela kwizilwanyana zasendle zasekhaya. Oku kuqinisekisa ukubonwa okumangalisayo kolwandle kunye nokutshona kwelanga ukusuka kwiifestile zeglasi eyaneleyo kunye nethafa elipholileyo elineshawari yangaphandle kunye nendawo eninzi yokuhlala. Zonke izinto ezitofotofo zangoku zikhona. ITUBHU ENTSHA YABUHLUNGU! Isithuthi se-SUV siyacetyiswa.
QAPHELA: Clientes Nacionales que realicen el pago por medio una tarjeta de crédito de un banco en Costa Rica pagan precio exento del IVA de acuerdo al decreto DGT-R-13-2020 (IVA a servicios digitales transfronterizos). IFavour comuníquese con el anfitrión antes de reservar para que le aplique el descuento correspondiente.
Yangoku, ipholile, ikhululekile. Le khabhinethi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ungalibaleki. Iyunithi entsha entsha, iAir Conditioner, ibhedi enkulu yaseCalifornia King, ikhitshi encinci enento yonke, amanzi ashushu, iTV yeSatellite, iWifi Internet, ibluetooth sound-bar, ishawa epholileyo yangaphandle, indawo eninzi yokuhlala yangaphandle nangaphakathi, kunye neyona ndawo intle. zonke: ITUBHU ENTSHA NGAPHANDLE YABUHLUNGU! kunye neteleskopu yaselwandle yakudala emangalisayo ongayisebenzisa ngokubona kwakho, ukuxabisa ngcono iimbono ezimangalisayo.
Le ndawo lilitye elifihliweyo, iPlaya La Macha kukuhamba nje imizuzu eli-10 ukusuka eMarina Pez Vela eQuepos, kwindawo ezolileyo nenoxolo yamakhaya ama-5, engqongwe yindalo, izilwanyana zasendle kunye nemibono emangalisayo yolwandle. Kukho iindlela zokukhwela ihlathi ezinomdla, ezicela umngeni kunye neendawo ezifihliweyo zokuhlola. Nceda uqaphele ukuba ziindwendwe ezinomzimba kuphela eziya kukwazi ukufikelela kwiindlela zokuhamba intaba kunye ne-cove, kwaye uqaphele ukuba iimoto zohlobo lweSUV ziyacetyiswa ukuba zifikelele kule ndawo.
Ndihlala nje iiyadi ezingama-50 kude nendlwana, ngoko ke ndiza kufumaneka ngayo nantoni na onokuyidinga, kuquka ukukunceda ngempahla yakho yokuhlamba ngomrhumo. Kodwa, izitshixo ziya kuba kwibhokisi etshixwayo kumnyango wangaphambili weyunithi yakho, awufuni nokundibona ukuba ukhetha ubumfihlo buphelele.
Ndihlala nje iiyadi ezingama-50 kude nendlwana, ngoko ke ndiza kufumaneka ngayo nantoni na onokuyidinga, kuquka ukukunceda ngempahla yakho yokuhlamba ngomrhumo. Kodwa, izitshixo zi…